समाज विकासको त्रिवेणीमा लता, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। सेवा, त्यो पनि निःस्वार्थ। सुन्दा सामान्य लागेपनि सेवामा समर्पित हुन भने निकै कठीन छ । बिना त्याग र समर्पण सेवा सम्भव हुन्न । र, समाजसेवाका लागि समर्पण अत्यावश्यक मानिन्छ ।
आजको युगमा सेवा भावको अभाव धेरै महसुस हुन्छ। लाग्छ, आजको युग स्वार्थी युग हो। आजको स्वार्थी दुनियामा सेवाभाव भएका मानिस धेरै कम भेटिन्छन्। बजारमा सेवा गर्नेहरुको जमात नभेटिने होइन। समाजसेवालाई माध्यम बनाएर ‘आफ्नो सेवा’ गर्नेहरुको भीड धेरै देखिन्छ। अर्थात स्वयम्सेवाको अर्थ परिवर्तन भएको अनुभूत हुन्छ। ‘स्वयमसेवा’ स्वयमको सेवामा परिणत भएको यस्ले अथ्र्याउँदैन र?
तर सबै मानिस त्यस्ता हुँदैनन् । सेवा, त्यो पनि निःस्वार्थ गर्नेहरु पनि यही समाजमा छन्। यिनै मध्येकी हुन्, समाजसेवी लता घिमिरे कार्की। समाजसेवा उनकालागि अपरिहार्य बनेको छ। उनको निःश्वार्थ सेवा भाव र सक्रियताका कारणनै उनले सन् १९९९ मा स्थापना भएको हेल्प नेपाल नेटवर्कको नेपाल च्याप्टरको सचिव पद सम्हाल्दै आइरहेकी छिन्।
उनी हेल्प नेपालको सचिव मात्रै हैनन् स्वास्थ्य संयोजक पनि हुन्। यसरी हमेशा सेवाकार्यमा जुट्दै आएकी लता घिमिरे कार्की आफ्नो व्यस्त समयलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढीरहेकी छन्।
लता घिमिरेको रुची सानैदेखि समाजसेवा तर्फ रह्यो। त्यही रुचीले उनलाई सेवाभावतर्फ आकर्षित गर्दै लग्यो। फलतः करिब १९ वर्ष अगाडि स्थापना भएको हेल्प नेपाल नेटवर्कसँग उनको सम्वन्ध जोडियो। यो सम्वन्धले उनलाई समाजसेवाप्रति झनै उत्साहित बनायो। आज उनी हेल्प नेपालका अनेकौं योजनाहरुको खाका तयार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विपद्का बेला केही दिनरात नभनी सेवामा जुटने गर्छिन्।
मुलुकका दुर्गम र दूरदराजमा शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हेल्प नेपालमार्फत कार्कीले पनि समाज सेवालाई निरन्तरता दिएकी छन्। मूलतः हेल्प नेपाल नेटवर्कले लामो समयदेखि कर्णालीको मुगु जिल्लाको एउटा गाउँमा हेल्थ पोस्ट (स्वास्थ्य चौकी) संचालन गर्दै आएको छ, जसको संयोजन समाजसेवी लताले गर्दै आएकी छिन् । मुगु हेल्थ पोस्टको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक हरेक कार्यलाई उनले यहीँबाट व्यवस्थित गर्छिन। अनि आँचोखाँचो पुग्छिन्, मुगु पनि।
सन् १९९९ मा बीबीसी नेपाली सेवामा तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत पत्रकार रवीन्द्र मिश्र र काठमाडौंमा विभिन्न संस्थाहरु मार्फत सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका अरुणसिंह बस्नेतको पहलमा स्थापना भएको हेल्प नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै दैवि प्रकोपका क्षेत्रमा काम गर्दैआएको छ। हेल्प नेपालले मुगुमा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरेको मात्रै नभई विभिन्न जिल्लामा साना साना योजनाहरुको संचालन गर्दै आएको छ।
हेल्प नेपालले वितेको १८ वर्षमा मुलुकका धेरै विद्यालयहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ भने विभिन्न विद्यालयहरुमा इ–लाइब्रेरी पनि संचालन गर्दै आएको छ। आजको सूचना प्रविधिको युगमा गाउँ गाउँका विद्यार्थीहरुमा सूचना प्रविधि विषयमा ज्ञान बाँडनैका लागि पनि हेल्प नेपालले यस किसिमका कार्यहरु गर्दै आएको हेल्प नेपालकी सचिव लता बताउँछिन्।
यसका अतिरिक्त मुलुकमा आइपरेका विपद्मा पनि हेल्प नेपाल, यसमा सक्रिय सदस्य तथा स्वयमसेवकहरुले आफ्नो दिलोज्यान लगाएर सेवा गर्दै आएका छन्। जुरेको पहिरो होस् वा तराईको शीतलहरी, अनि परार गएको शक्तिशाली भैँचालो, हरेक विपद्मा हेल्प नेपालका स्वयमसेवीहरु परिचालित हुन्छन्।
यतिबेला २०७२ साल बैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पमा क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा नमुना विद्यालयको निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ, हेल्प नेपालले। विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमै रहेका नेपालीको सहयोगबाट संचालित यस संस्थाले दाताबाट प्राप्त रकम सबै सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको हेल्पकी सचिव लता बताउँछिन्।
स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरेर हेल्प नेपालले विभिन्न कार्यक्रम पनि संचालन गर्ने गरेको छ। लता घिमिरे भन्छिन्, ‘स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउँदा कार्यक्रम सफल हुने गरेको छ।’
समाजसेवा गर्न कुनै माध्यमको आवश्यकता पर्छ। माध्यम भएपछि गरिने कामले सार्थकता पनि पाउने गरेको छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने लता घिमिरे कार्कीकालागि हेल्प नेपाल यस्तै एउटा माध्यम बनेको छ, सेवा गर्न। अझ घर परिवारको सहयोगले गर्दा उनले समाजसेवालाई झन समय दिन पाएकी छन्।
लता समाजसेवामा मात्रै नभएर भ्याएसम्म राजनीतिमा पनि संलग्न रहँदै आएकी छिन्। राजनीतिक सचेतनाको उपलब्धी हो यो, उनको राजनीतितर्फको आकर्षण। अहिले पनि प्राध्यापन, समाजसेवा र राजनीतिलाई उनीसँगै लिएर हिँडिरहेकी छिन्। उनी भन्छिन, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा आत्म सुन्तुष्टि हो। हरेक कार्यका लागि समय व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ र मैले समय व्यवस्थापन गर्दै आएकी छु ।’
लता घिमिरे कार्कीले अशक्त, असहाय र बालबालिकालाई सहयोग गर्नु सबैभन्दा ठूलो मावन धर्म ठानेकी छिन् । त्यसैले पनि उनी यो मानव धर्ममा निरन्तर सक्रिय भएर लागिरहेकी छिन् ।
राजनीतिप्रति पनि सक्रिय लता भन्छिन्, ‘अचेल नेताहरुलाई गाली गर्ने प्रचलन बढेको छ । तर नेतालाई मात्रै गाली गरेर समाज परिवर्तन हुँदैन् । यसका लागि हामीले आफैंबाट केही नयाँ कुराको थालनी गर्नुपर्छ ।’
सायद यही सोचको परिणती हो, लता घिमिरे कार्कीको समाजसेवाप्रतिको लगाव र सक्रियता । र, यहि लगावका कारण उनको समाजसेवाको कर्ममा कुनै वाधा अडचन आएको छैन । उनी निरन्तर आफ्नै गतिमा समाजसेवा, प्राध्यापन र राजनीतिमा हिँडिरहेकी छिन् । समाज विकासको त्रिवेणीमा उनको यात्रा निरन्तर छ । उनी यसैमा निरन्तर लागिरहन चाहन्छिन् ।